Best 24 Leg Leg Tattoos Chirongwa Chakanaka Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 24 Leg Tattoos Pfungwa Yokuda Kwevarume nevakadzi
Kana iwe uri kutora chikamu chemuviri wako chakanga chine, iwe haufaniri kushingaira kubhadhara mari yakakodzera yeiyo. Zvinhu zvose zvinofungidzirwa, zvichaiswa mumuviri wako nekusingaperi! Ichi ndicho chikonzero nei iwe uchifanira kuva nekatenderedzwa yemakumbo akanaka.
2. Yakanaka kutarisa gumbo tattoo
Kunaka kutarisa #leg tattoo chimwe chinhu icho vanhu vari kushandisa iko kutarisa zvinoshamisa zvinoshamisa. Ichi ndicho chikonzero ichi chikwata che tattoo chinoshamisa.
3. Nyore mutsara
Basa iri reinning rinenge rakafanana kune rimwe ripi zvaro raunogona kugara uchikumbira.
Izvo zviri nani huwandu hwehutungamiri, hukuru huri mhosva.
5. Mifananidzo yakaisvonaka yemakumbo
Iwe uchakurumidza kunzwisisa kuti hazvina kukodzera kupa vaviri kana matatu madhora kuti apedze #tattoos munguva pfupi.
6. Cute leg leg tattoo
Muviri wako zvirokwazvo unofanirwa nekanakisisa, uye kana uchinge uwana kufunga kwakajeka pamusoro pemari yemari inotarisirwa nepamusoro wechinyorwa chinyorwa, iwe unogona kuwana kukanganisa mukana wekusachengetedza mari, uye munguva iyo inoreva nguva inoronga urongwa hukuru uye mutsara we tattoo yako.
7. Kuchinja mutsara wemakumbo
Iwe unogona kuva nechokwadi kuti chero nyanzvi yemhizha ichakubhadhara iwe maererano nehutano hwavo, nguva inofanirwa kuita basa uye chimbo chinodiwa kuita saizvozvo.
8. Wonderful leg leg tattoo
Hazvirevi mabhii maviri kana zvitatu zvekutora kuti uzive mari, semhizha inoda kukusangana iwe usati wataura mari yekuita basa.
9. Mutsipa wakagadzirwa tattoo design pfungwa
Kushanyira kuchitoro kunobatsira zvikuru, sezvo iwe unogona kuwana pfungwa yakajeka yebasa rinowanikwa, uye iwe unogona kuwana zvakanyatsofungisisa pamusoro pemari, zvichikubvumira kuti ufananise kuchinjwa chero kupi zvako muurongwa hwekunyora iwe ungangodaro uchifunga ava kuda kuva.
10. Super leg leg
Heino mafungiro anokosha ekutaura zvose zvinokonzerwa neinking: Mimwe nzvimbo inowanzotambudza, ichikurudzira mhizha kuti asimudzire.
11. Chimiro chemukaka wakaisvonaka
Kunyora kunowedzera kune zvinodhura, zvinyorwa zvisinganzwisisiki hazvisi zvinokosha.
12. Chirwere chetachivara chakanaka
Kuyera ndiyo pfungwa inonyanya kukosha pamutengo waunoda kubhadhara. Yakakura kukura, iyo yakakura mari.
13. Chikwata chizere chembambo
Paunenge uchida kuti mhizha aite rondedzero yakajeka kwauri, unogona kutarisira kubhadhara kupfuura kana iwe wakanga watora rondedzero yakasarudzika.
14. Half leg tattoo
Paunenge uchitaura zvakataurwa kubva kune unyanzvi, unogona kukumbira kugadziriswa kurongeka, chengetedza kune vamwe vadzidzisi kana kuchinja zvaunotarisirwa maererano neurongwa hwako hwemari.
15. Creative leg leg tattoo
Iwe unogona kufunga nezvekuchinja nzvimbo yechirongwa chako chawakaronga, kana kuti kuputsa pfungwa dzaro dzisinganyatsooneki zvachose uchisiya pfungwa yako yakazara. Zvichida haungafari kugara zvakasimba kwechinguva kuti uchengetedze mari yakawanda uye uwane tattoo yepamusoro, zvakafanana zvakarongwa!
16. Chikwata chizere chembambo
17. Rudo rutsoka rwechikwata
Kuwana tattoo chimwe chinhu chinoda kuramba uye simba. Iwe unofanirwa kurarama nemutambo wezvimwe zvakasara zvehupenyu hwako, kunze kwekuti iwe unoda kubhadharira kubviswa kwemalasi, saka unofanirwa kuve nechokwadi kuti tattoo yaunowana ichinhu chaunoda kwechinguva.
19. Simba rakatemwa gumbo
Kana iwe usina kutora tattoo saka kusarudzwa kwakanyanya kutyisidzirwa, kunyanya pamusana pokuti sarudzo ichokwadi zvisarudzo zviviri kubva pane zvaunofanira kusarudza tattoo uye kuti ndezvipi pazviri pamuviri wako.
20. Mutsindo unoshamisa wemoto
21. Yakawanda inoshamisa inonzi tattoo leg
Paunenge uchifunga nezvekutora tattoo kana kwete, unofanirwa kusarudza kuti uwane kupi pamuviri wako. Mune chiitiko chaunenge uchida kuita mubasa rakasununguka, iwe unogona kusarudza kuwana tattoo mumhando yaunogona kuvanza.
22. Flower leg leg
23. Sexy leg leg tattoo
Iva sezvazvinogona, nemasangano akasiyana-siyana, mamiriro ezvinhu akasiyana uye zviratidzo hazvionekwi pasi zvakanyanya. Zvechokwadi, kunyange vanhu kubva pamapurisa vanomanikidzira kupfeka zviono kuti varatidze uye havazodiwi kuvafukidza.
Pachinhu ichi chiitiko chokuti basa rako rinotaura kuti iwe unogona kuva nechiratidzo chero kupi zvako chaunoda, saka kusarudzwa ndeko kwako.
zuva tattooscompass tattookorona tattooseagle tattooszodiac zviratidzo zviratidzoangel tattoosdiamond tattooAnchor tattoosflower tattoostattoos for girlscat tattoostattoos kuvanhuFeather Tattoocross tattoosrip tattoosrudo tattoostattoo ideasoctopus tattooHeart Tattooscouple tattoostribal tattooskoi fish tattoobutterfly tattoosmimhanzi tattoostattoo yezisosleeve tattoosscorpion tattoochifuva tattoosmwedzi tattoosrose tattoosarm tattoosGeometric Tattoosmehndi designshamwari yakanakisisa tattoosbirds tattoosback tattoosmaoko tattooshenna tattooinfinity tattoofoot tattooslotus flower tattoocute tattooswatercolor tattooelephant tattoocherry blossom tattooshumba tattooAnkle Tattoosarrow tattooneck tattooshanzvadzi tattoos